टिकटकबाट ८४ लाखको अफर?यस्तो पनि हुन सक्ला र? |
February 19, 2022 February 19, 2022 adminLeaveaComment on टिकटकबाट ८४ लाखको अफर?यस्तो पनि हुन सक्ला र?
कोरोनाका कारण सिर्जित लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प भएकै बेला पोखराकी फेवा क्षेत्री (नाम परिवर्तन) लाई उनका चिनेका एक साथीले टिकटक मार्फत भिडियो बनाएर व्यवसायको प्रवर्धन गर्न सुझाए ।फेवाले सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय चर्चा बटुलेको टिकटकका बारेमा धेरै सुनेकी र थोरै मात्र बुझेकी थिइन ।
उनलाई साथीको त्यो आइडिया उपयुक्त लाग्यो ।र, आफ्नै परिवारको भिडियो बनाउन सिकेर टिकटक चलाउन थालिन । सिक्दै गर्दा उनले आफ्नो व्यवसायका सामानहरूको भिडियो समेत बनाएर हाल्न थालिन । पोखरा न्यूजबाट साभार
फेवाले सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय चर्चा बटुलेको टिकटकका बारेमा धेरै सुनेकी र थोरै मात्र बुझेकी थिइन । उनलाई साथीको त्यो आइडिया उपयुक्त लाग्यो । र, आफ्नै परिवारको भिडियो बनाउन सिकेर टिकटक चलाउन थालिन । सिक्दै गर्दा उनले आफ्नो व्यवसायका सामानहरूको भिडियो समेत बनाएर हाल्न थालिन । पोखरा न्यूजबाट साभार
यसै क्रममा उनको टिकटकमा एक जना अपरिचित पिटर इरिक नाम गरेको विदेशी नागरिकको म्यासेज आयो । आफू अमेरिकी नागरिक रहेको र हाल युकेमा बसोबास गरिरहेको भन्दै अंग्रेजीमा आएको व्यक्तिको म्यासेजले उनको ध्यान तान्यो ।
३४/ ३५ वर्षीया फेवाले आफू विवाहित महिला भएको र स-साना बच्चा रहेको सुनाएपछि पिटरले आफ्ना पनि स-साना बच्चा रहेको र श्रीमतीको दुई वर्ष अघि मृत्यु भएकाले बाल बच्चाको रेखदेख आफू एक्लैले गर्दै आएको बताए । पिटरले श्रीमतीको मृत्यु भएको भनी दुखेसो गरेपछि फेवाले पनि आफ्नो श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर रहेकोले बाल बच्चाको आफूले रेखदेख गरेको भन्दै व्यवहारिक पाटोलाई सम्झाउँदै पिटरलाई सान्त्वना दिइन ।
यस क्रममा पिटरले फेवाको बारेमा भन्दा बालबच्चाको बारेमा बढी सोधखोज गर्ने र उनीहरूको केयर बढी गर्न थाले । पिटरले आफूलाई भन्दा बालबच्चाको बारेमा बढी चासो देखाउन थालेपछि फेवालाई पिटर राम्रै नियतको मान्छे हो भन्ने लाग्यो । टिकटकमा बोल्दै जाँदा पिटरले एक दिन फेवालाई गिफ्टको अफर गरे । फेवाले आफूलाई कुनै गिफ्ट नचाहिने बताइन ।
टिकटकमा बोल्दै जाँदा पिटरले एक दिन फेवालाई गिफ्टको अफर गरे । फेवाले आफूलाई कुनै गिफ्ट नचाहिने बताइन । गिफ्ट नलिने बताएपछि फेवालाई पिटरले हप्काउँदै कस्तो खालको मान्छे होस् मैले बालबच्चाको लागि सहयोग गर्न खोजेको हो नलिने भए तँलाई ब्लक गर्छु भन्दै ब्लक नै गरे ।
फेवा अचम्ममा परिन र सोचिन, कस्तो खालको मान्छे रहिछ गिफ्ट लिन्न भन्दा ब्लक नै गर्‍यो । उनले सो कुरा लगतै आफू नजिकै बस्ने बेगना तमु (नाम परिवर्तन) लाई सेयर गरिन । बेगनाले फेवासँग के नै गिफ्ट पठाउला र उसले ? किन नलिने भन्ने लिन्छु भन्दे भन्ने सल्लाह दिइन ।
अचम्म मानेर बसिरहेकी फेवालाई ब्लक गरेका पिटरले त्यसको तीन/चार घण्टामै अन ब्लक गरे र कुराकानी पुनः सुरु गरे । लगत्तै पिटरले फेवाको ह्वाटस्एप नम्बर मागे । फेवाले आफूले ह्वाटस्एप चलाउने नगरेको र ह्वाटस्एप नभएको बताएपछि पिटरले फेवालाई ह्वाटस्एप डाउनलोड गर्न र एक्टिभ गर्न लगाए ।
ह्वाटस्एप एक्टिभ गर्नासाथ पिटरले आफू कारमा रहेको र कारमा आफ्ना बच्चाहरू रहेकोले धेरै बेर बोल्न नमिल्ने बताउँदै गिफ्ट पठाउने ठेगाना दिन आग्रह गरे । त्यसको केही बेरमै पिटरले क्रिसमसको गिफ्ट प्याकेट भन्दै त्यसभित्र रातो रंगको आइफोन, चुराहरू र ५० हजार डलर बालबच्चाको लागि राखेको भन्दै पार्सल एयरपोर्टबाट पठाउँदै गरेको भिडियो फेवालाई पठाए ।
सितापाईलामा एसिड हान्ने युवक पक्राउ, यस्तो रहेछ भित्री कारण, एसिड प्रहार गर्नु अघिको यस्तो कहानी